DMX mere facade Lighting
DMX mere 3D tubes
DMX mere pixel ìhè
Kedu ihe kpatara eji achọta isi mmalite ọkụ?
Njirimara nke ọkụ ọkụ ọkụ: 1. Arụ ọrụ: Ma ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na ngosi ngosi ngosi ọkụ nwere ike ịchịkwa kọmputa iji kesaa ozi mgbasa ozi na oge, mgbasa ozi mgbasa ozi vidiyo, ma dochie ọdịnaya mgbasa ozi na uche. Ihe ngosi ọkụ nwere hig ...
Kedu ihe jikọrọ ọkụ na-acha n'ahịrị na ọkpọkọ nche?
Nke mbu, ikpochapu ikpo oku, n'eziokwu, enwere otutu ndi mmadu ndi na-aghotaghi ekpughari oku na oriọna na oriọna. Ọtụtụ mmadụ na-emetụ shea ahụ. Mgbe ahụ ma shei ahụ dị ọkụ ma ọ bụ na ọ bụghị, n'ezie, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime azịza ezi uche dị na ya. Azịza ikpeazụ maka ma ọ dị ọkụ ma ọ bụ na ọ bụghị bụ ịhụ Nke ...
Gịnị bụ ngwa ndapụta nke Ikanam iju mmiri ọkụ?
Anyị nwekwara ike ịkpọ oku ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Igwe ọkụ ọkụ na-achịkwa ọkụ ọkụ. Ugbu a, e nwere ụdị ngwaahịa abụọ ịhọrọ. Otu bụ nchikota nke ike ibe, otherdị nke ọzọ na-eji otu mgbawa dị elu. N'iji ya tụnyere ihe abụọ, nke mbụ dị mma ...
Kedu otu esi arụ ọrụ ọkụ ọkụ kwa ụbọchị?
N'ezie, maka ọkụ ọkụ n'okporo ụzọ LED, ọ bụghị na anyị etinyela ha, ọ dịghịkwa mkpa ijikwa ha. Naanị mmezi na ndozi oge niile nwere ike ịkwado ogologo oge. Maka ọkụ ọgbụgba ọkụ ọkụ, hichaa oriọna ahụ n'oge eji eme ihe n'èzí. Ọrụ bụ isi bụ ịnagide ájá dị n'elu. Na ...
Gini mere akara uzo ozo kwesiri iji dọọ anya na arụmọrụ nke ọkụ ọkụ?
Ebumnuche bụ isi nke ọkụ ọkụ bụ iji gbanwee onyinyo abalị nke ụlọ nkwari akụ ahụ, ka e wee nwee ike imegharị ụlọ ahụ ma wughachi ya n'abalị, na-egosi amara na njirimara ndị na-enweghị ike igosipụta n'ehihie, iji dọtakwuo ndị ahịa. 1, arụmọrụ Lezienụ nke oma ...
Kedu maka mgbanwe nke ọkụ linear LED?
Ikanam oriọna oriọna bụ oriọna mgbidi ọkụ usoro aluminom profaịlụ oriọna. A na-eji ngwongwo ngwongwo na nke dị fechaa na-arịwanye elu nke aluminom alloy nrụgide anwụ-mgbatị elu-mgbanaka mgbanaka silicon roba akara mgbanaka, nke bụ mmiri na-enweghị ntụkwasị obi Oriọna nwere ike ịbụ ...
Kedu ụdị ọkụ bụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ?
Ikanam ebe ìhè isi bụ ọhụrụ ụdị nke ji achọ ìhè, nke bụ a emeju ka linear ìhè isi na idei mmiri ọkụ. Igwe oriọna ndị nwere ike dochie ụfọdụ nkọwa ngosipụta ngosipụta nke na-enweta nsonaazụ nke ntụpọ na ihu site na ngwakọta agba pixel. Ikanam isi ìhè ọkụ bụ ...
Kedu usoro ụkpụrụ ọrụ nke ọkụ ọkụ ọkụ?
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, e jirila mgbidi mgbidi mee ihe n'ọtụtụ ebe, dị ka ọkụ ọkụ nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ọkụ nke ụlọ gọọmentị, ọkụ mgbidi nke ụlọ akụkọ ihe mere eme, ebe ntụrụndụ, wdg; ihe di iche iche di na ya na abawanye Wider. Site na ...
Mgbanwe ndị dị a theaa nke ọkụ nke ụlọ ndị dị n'èzí ewetaworo n'obodo ahụ?
Kedu ọrụ ọkụ ụlọ? Mgbanwe ndị dị a lightingaa ka ọkụ ụlọ ahụ wetaara anyị? N’obodo ebe ndị mmadụ bi, rie, biri, ma mee njem, a ga-asị na ụlọ ahụ bụ ọkpụkpụ mmadụ na abalị ọbara ya n’obodo ahụ, na-akwado ọrụ na mmepe obodo. Dị ka isi pa ...
Ihe ịma aka nke ngwaahịa ọkụ ọkụ-mgbasa mgbasa?
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, site na ọganihu ngwa ngwa nke teknụzụ mgbawa nke ikanam, ngwa ahịa nke ndị LED aghọọla dimkpa. Ikanam ngwaahịa a maara dị ka "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ìhè isi" n'ihi na ha obere size, ala ike oriri, ogologo ọrụ ndụ, elu nchapụta, gburugburu ebe obibi protecti ...
Nkọwa zuru ezu nke ihe ngosi iri kachasị mma nke ọkụ ọkụ ọkụ?
Dị ọkụ na-ezo aka ma isi iyi ọkụ ahụ na-ezute ihe ngosi ọkụ dịka ọrụ anya, nkasi obi anya, nchekwa, na ịma mma. Ngwa ziri ezi nke ihe ngosi ọkụ ọkụ ga-eweta ọhụụ ọhụụ na oghere ọkụ gị, ọkachasị na ọkụ ọkụ ọkụ ...
site ha na 20-08-04
Ọnọdụ ugbu a: Austech Lighting> News Center> Kedu ụdị ọkụ bụ isi ọkụ ọkụ ọkụ? Kedu ụdị ọkụ bụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ? Ikanam ebe ìhè isi bụ ọhụrụ ụdị ji achọ oriọna, nke bụ a emeju ka linear ìhè isi na idei mmiri ọkụ. Smart lamps nwere ike ...
Dj Ìhè, Ikanam Pixel Light, Iwuli Ihu Ihu Ihu Ihu Ihu, Ọkụ ọkụ ọkụ, Dj Facade LED, 3d Dugara Tubes,
Gịnị bụ ihe mere ndị mere dugara ìhè ...
Gịnị mere linear ọkụ na guardrail t ...
Gịnị bụ ngwa ndapụta nke Ikanam ...
Kedu otu esi arụ ọrụ kwa ụbọchị nke ikanam ...
Gịnị mere ndị na-ada akara ìhè ika akwụ a ...
Adress: B ụlọ, Chuangjian ụlọ ọrụ ogige, Shiyan, Bao'an, Shenzhen China